Iphaneli yentsimbi yothango lwetshiphu mveliso kunye nabenzi | Weijia
Kuba intsimi mveliso, idiphu eshushu kwalenza intsimbi nothango lwaso yinto esetyenziswa ngokubanzi izinto zokwakha njengoko nendlela yokuhamba. Ngenxa yenkangeleko elula, umthwalo wokuthwala umthwalo omkhulu, unyango lomphezulu wokulwa umhlwa, kunye nokufakwa ngokulula. Yenza ukhetho lwakho lokuqala!
Steel nothango lwaso sisiseko yakhiwe ngokuzala bar tyaba kunye bar twist, yenziwa yi iwelding manual okanye olwenziweyo iwelding. Kodwa ukuzoba okwenziwe ngokwezifiso kuyamkeleka, njengokongeza iihenjisi, ezidityaniswe ngeplate etshekiweyo, kunye nokusika / iigreyiti zentsimbi ezimile.
Ukucacisa lenjongo nothango lwaso lobhedu:
Iindidi lenjongo yothango lwetsimbi:
Serrated Steel nothango lwaso lobhedu
Akukho-Slip umphezulu onetyiwa. Zilungele indawo ezinamafutha.
Chwetheza Steel nothango lwaso lobhedu
Ukugcina iindleko kunye nokujonga okuhle
Uthango-Itshixiwe nothango lwaso lobhedu
Ibha yomnqamlezo ngaphakathi kwintsimbi ethe tyaba. Yomelele
Cofa-itshixiwe nothango lwaso lobhedu
Bar Flat nge welding kunye bar tyaba
Ukuthwala ububanzi bentsimbi ethe tyaba: 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 65mm, 70mm, 80mm
Ukuthwala ubunzima bentsimbi ethe tyaba: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Ukuhlela inkcaza yentsimbi ethe tyaba iyafana neyentsimbi ethwele umthwalo
Ibar yewist: Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ12mm
Umngxuma wokuvula: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 100mm ... njl
Iimveliso zinokudityaniswa ngeplate ye-checkered. Kwaye uhlobo lomnyango uhlobo nothango lwaso lobhedu.
Ubungakanani obukhulu beemveliso yi-1Mx7M / iphaneli. Idiphu Hot kwalenza.
Cima iSpan mm
Nxibelelana nathi namhlanje! Samkela uphando lwakho!
Egqithileyo Igridi yelanga i-FRP yothango lokuhamba ngeenyawo
Okulandelayo: I-Anti skid Perforated Metal Plate Grip Strut Safety Grating
Ukuhombisa Metal nothango lwaso lobhedu
Kumgangatho nothango lwaso lobhedu
Umgangatho kwalenza nothango lwaso lobhedu
Industrial Umgangatho nothango lwaso lobhedu
Steel Bar nothango lwaso lobhedu
Umgangatho wentsimbi nothango lwaso lobhedu